Namoahana didy fampisamborana… : voaheloka higadra herintaona an-tranomaizina ny Kly Lylison | NewsMada
Namoahana didy fampisamborana… : voaheloka higadra herintaona an-tranomaizina ny Kly Lylison
Tsy re tsaika fa natao mangingina. Nivoaka, omaly tetsy amin’ny fitsarana Anosy tao amin’ny efitra faharoa ny didim-pitsarana manameloka ny loholona, ny Kly Lylison de Réné. Voaheloka higadra herintaona an-tranomaizina ity olona akaiky an-dRajoelina ity.
Tsy vitan’ny figadrana herintaona an-tranomaizina izany sazy izany, fa mbola namoahan’ny fitsarana didy fampisamborana koa ny Kly Lylison. Samy tsy nisy nahafantatra izao fotoam-pitsarana izao ny fianakaviany sy ny havany na koa ireo olona akaiky azy. Efa nivoaka ny didy vao nahalala izany izy ireo. Tsy niatrika izany fotoam-pitsarana izany rahateo ity loholona Mapar ity. Efa nialohavan’ny fitsarana ireo efatra hafa ny herinandro teo izany. Voarohirohy ho voairaky ny Kly Lylison nanao sakana sy nandoro kodiarana teny Ambohipo tamin’ny taon-dasa ny izy ireo. Anton’ny fiampangana azy rehetra ireo ny fitarihana vahoaka hihetsika ho amin’ny fanaovana tanàna maty teto an-dRenivohitra.
Manoloana izany, nilaza ho tsy mbola naheno io vaovao io ny mpandrindra ny Mapar, ny depiote Razanamahasoa Chrisitine raha nanontaniana an-telefaonina, omaly. “Mbola aty am-pandevenana ny minisitra teo aloha, Rabenirainy mivady aty Ambalavao Fianarantsoa aho io ka tsy mahalala ny vaovao any… Tsy mazava amiko mihitsy koa ilay didim-pitsarana… Ho hita eo ny ho tohiny”, hoy fotsiny izy. Tahaka izany koa ny mpisolovava ny loholona Lylison, ny Me Razafimahefa. Tsy mahalala na inona na inona. “Samy gaga isika izao fa tsy an-kiteniteny ny raharaha. Tokony mbola ho eo anivon’ny polisy na ny zandary io resaka fisamborana io… Miandry ny fampahafantaran’ny fitsarana sisa aloha izahay izao vao hita eo ny hatao. Tsy mbola eto an-tanana koa ny antontan-taratasy momba ity raharaha ity”, hoy izy.
Hailika tsy ho loholona intsony
Nanambara kosa ny loharanom-baovao eo anivon’ny fitsarana fa efa natao tamin’ny 7 febroary ny fitsarana. “Famoahana didy ny androany (omaly) ary nahazo sazy mitovy aminy koa ireo efatra mirahalahy, namany namaly ny antso fanaingana olona hanao tanàna maty…”, hoy izy.
Tsiahivina fa efa nangata-panazavana ny amin’ny fepetra tokony horaisina teo anivon’ny HCC ny birao maharitry ny Antenimierandoholona ny herinandro teo, satria efa tsy nivory intsony ny loholona Lylison. Tsy mbola namaly izany anefa ny etsy Ambohidahy. Niafara amin’izao didy fanagadrana izao ny raharaha ankehitriny.
Ankoatra izany, voahaja avokoa ireo pitsopitson-dalàna amin’ny maha loholona azy amin’izao namoahana ny didy izao ? Tena hikaroka sy hisambotra ity kolonely eo anivon’ny zandary ity ve ny namany manoloana io didy nivoaka amin’ny hisamborana azy io. Efa heno ihany tamin’ny taon-dasa fa tsy mitovy hevitra ireo be galona eo anivon’ny zandarimariam-pirenena momba ity raharaha “Lylison” ity.
Etsy andaniny, mirona mankany amin’ny fanilihana tanteraka ny Kly Lylison tsy ho loholona intsony izany didy izany. Didim-pitsarana politika, toy ny mahazatra sy niainana teto ihany ?